Iphephancwadi lePC, usiya kuguqulelo lwedijithali- iGeofumadas
IPhephabhuku, usiya kuguqulelo lwedijithali
Matshi, 2011 Apple - Mac, Internet kunye neBlogs
Kudala-dala inguqulelo yesiNgesi yeli phephancwadi yayithathe umhlala-phantsi, kwaye nangona inguqulelo yamaSpanishi yayibhengeza, iivenkile ezinkulu zaqhubeka zibonisa iikopi. Okokugqibela, emva kweenyanga ezimbalwa ndibuza, ndiye ndavuma ukuba iTelevisa ekugqibeleni iyekile ukuvelisa ngokuprinta kwaye ndinoluvo lokuba kwidijithali siza kubona iJambitz okwethutyana.
Ke bendingenalo ukhetho ngaphandle kokukhupha i-iPad kumkhono wam, khuphela uguqulelo olukhululekileyo lweZinio kwaye ujonge imagazini apho. Kuyahlekisa, kodwa andilufumananga uguqulelo lweSpanishi, mhlawumbi lukhona kodwa ngenxa yokuba inkqubo yokukhangela evenkileni ibicotha, ndiye ndaphela ndamkela ubulungu obunenguqulo yesiNgesi.
Ewe, ngexabiso, wahlawula malunga ne-US $ 5 ngekopi nganye, kwiinyanga ezili-12 waphantse wasebenzisa iidola ezingama-60. Ubhaliso lwedijithali luxabisa nje i-US $ 18 ngonyaka, kunye nenketho yokuthenga nge-Paypal. Ke xa kuziwa emalini, kwakunzima ukuba ndihlawule i-30%.
Olunye uncedo ziikhonkco ngaphakathi komxholo wokujonga kwakhona iihardware okanye iiwebhusayithi zesoftware. Ngokucofa kanye ungaya kwisiza ngaphandle kokulahlekelwa yindlela yokubuyela kwiphepha, kuba ukukhangela akuyi ku-Safari kodwa kunoko kuphakamisa isikhangeli sangaphakathi seZinio.
Kuphumla kwamehlo ukuya kwinqabileyo, ukuze ukwazi ukufunda ngaphandle kokucutha amehlo.
Okukhethwa kukho ukuqokelela ngoku kulula kakhulu, kuba imfumba yeekopi ezilondoloziweyo ukususela ngonyaka we-95 sele sele idala imvakalelo embi kwendlu yam.
Ngenxa yezizathu zomgama, uZif Davis wavelisa ikopi kwaye e-United States yayile veki inye yokusungulwa. Kodwa yafika kwiLatin America kwiiveki ezintathu kamva kwaye nenguqulelo yamaSpanishi yayilindelwe kwade kwahletywa okokugqibela okuvela kwiTVyNovelas nabanye abaziswa ngumhambisi walapha ovela eMexico; kwinqanaba lokuba xa izihloko ezininzi zazifundwa zazisele ziphelelwe lixesha okanye zazisaziwa nge-Intanethi.
Ewe, amava awafani. Kuhlala kuneso sithuba sibangela ukungabinayo ikopi ngesandla, ukukrwela ngepensile eqhelekileyo, ezothando endicinga ukuba ziya kufa ekuhambeni kwexesha.
Ukuzama ukubonakala kwiZinio, kunye namaphephancwadi afana ne-National Geographic, iMicchanical Popular kunye ne-PC yehlabathi eliza kusenza ndizithenge.
Ndibuhlungu, kuba abantwana bam abayi kuba nayo indawo yokusika ngomsebenzi wabo wezandla Nangona kum kuyinzuzo kuba ingqokelela exabisekileyo yaphela ngathi itshizi kaHelvetia emva kweealbhamu zazo ezininzi; Kuqala unyana wam, endaweni yokusika, waqala phantse ngamazinyo akhe, emva koko intombi yam inezikere ezintle okanye istiletto esonakalisa ngaphezu kwentloko enye kunye nomongikazi okwisikolo samabanga aphakamileyo ngesizathu sokuba sitshiphu kunemibala eshicilelweyo.
Obu bubomi obuguqukayo, abuyeki ukundimangalisa indlela ezi modeli ziguquka ngayo ngolu hlobo. Kwakungekho nto ingako ndiyifunayo, kuba izimvo (zintle kakhulu) zeDvorak, Costa nezinye zaziguqulelwe ngokoqobo; emva UNadia Molina kuphuma, emva UCarlos MendozaUmncinci omncinci wecala lomntu ukuba i-editorial idlulisele kwikhasi lesithathu ukuba umhleli wokugqibela ususwe.
Ngenxalenye yalo, umba wale nyanga uzisa njengomxholo oyintloko ukuhlaziywa kwezicelo ezibalulekileyo ze-50 ze-Ipad kwiindidi zomsebenzi, imidlalo, intanethi, intengiso, ukunxibelelana, ukuzonwabisa, iindaba kunye nobuchule.
Ukusuka kwinto endiyibonayo, iphephancwadi ngexesha kuya kufuneka lihlaziye igama lalo, kuba yonke imihla liyabhaptizwa ngakumbi kuphononongo lweemveliso zeApple. Ngeli xesha kukho inqaku elihle elibonisa yonke imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukufuduka ukusuka kwi-PC ukuya kwi-Mac.
Enye into eyothusayo kukuphononongwa kwe-HP Pavilion dm1z, incwadi ye-net eshiya incinci ukuba ingafuneki. Ndincoma ukuyijonga.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IHonduras: Emuva kwintlekele, imfazwe yamakhaya iphinda ikhethe
Post Next 10 egeomates March 2011Okulandelayo »